ကံဆိုးသောဖြစ်ရပ်များစီးရီးသည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် - Netflix မူရင်း
ကံဆိုးသောဖြစ်ရပ်များစီးရီးသည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်
Series Unfortunate Events Is One 50 Best Tv Shows Netflix
အကြွေး - ဂျိုး Lederer / Netflix
Zootopia သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည် Sing Street သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်တက်နေသည်
Neil Patrick Harris ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Netflix မူရင်းစီးရီး A Series of Unfortunate Events ၏စီးရီးသည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။
ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်သောကြာနေ့တွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည် ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်သည်ယနေ့အထိအကောင်းဆုံး Netflix ကမူရင်းစီးရီးပါပဲ။
Netflix ၏မူရင်းစီးရီးသည်နာမည်တူ Lemony Snicket ၏ ၁၃ စာအုပ်တွဲပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ပထမရာသီသည်ဇာတ်လမ်းတွဲရှစ်ခုပါဝင်ပြီးစာအုပ်လေးအုပ်ပါဝင်သည်။ Netflix အတွက်စီးရီးကို Daniel Handler၊ Barry Sonnenfeld နှင့် Mark Hudis တီထွင်ခဲ့သည်။ Handler သည် Lemony Snicket အောက်ရှိစာအုပ်စီးရီးများကိုလည်းရေးသားခဲ့သည်။
နီးလ်ပက်ထရစ် Harris က, ပက်ထရစ် Warburton, Malina Weissman, Louis Hynes ။ K. Todd Freeman နှင့် Presley Smith တို့သရုပ်ဆောင်ထားသော Joan Cusack၊ Aasif Mandvi၊ Alfre Woodard၊ Catherine O'Hara, Don Johnson, Rhys Darby, Usman Ally, Matty Cardarople, Sara Canning, Jacqueline နှင့် Joyce Robbins တို့နှင့်အတူ အနည်းငယ်အံ့သြစရာ guests ည့်သည်များ!
မိဘများ မီးလောင်၍ သေဆုံးသွားပြီးနောက် Violet၊ Klaus နှင့် Sunny Baudelaire (Malina Weissman၊ Louis Hynes နှင့် Presley Smith) တို့သည်သူတို့၏ဆွေမျိုးမကောင်းသောဆွေမျိုး Count Olaf (Neil Patrick Harris) နှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။ ဒါကြောင့် Olaf သာသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့မိသားစုကံဇာတာအဘို့ထိုသူတို့လိုလားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်အဖြစ် Baudelaires '' ပြproblemsနာများ၏အစသာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ်: ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး ပြန်လည်သုံးသပ်
သတင်းကောင်း! Netflix ကဒုတိယရာသီအတွက်စီးရီးကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏အချိန်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေသော်လည်းကောင်းကောင်းအသုံးချလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
လုပ်ပါ ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး သင်၏နောက်မူးရူး - နာရီ! အရမ်းကောင်းတယ်
ဖတ်ရမည်Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀
အကယ်၍ သင်သည်စီးရီးပထမရာသီပြီးဆုံးပြီဆိုလျှင်၊ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ၏ကျန်အဆင့်ကိုကြည့်ရှုရန်မမေ့ပါနှင့်စီးရီး၏ဒုတိယရာသီကိုထုတ်လွှင့်ချိန်တွင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။ ဝန်ဆောင်မှု!
နောက်ဆုံးချန့်စ် U ကစားသမားများနှင့်နည်းပြများ။ သူတို့ဘယ်မှာလဲ။
Hubie ဟယ်လိုဝိန်းပွဲ: Adam Sandler သည် Cameron Boyce နှောင်းပိုင်းတွင်ဂုဏ်ပြုချီးကျူးသည်
အဆိုပါ strain ရာသီ2Hulu အပေါ်ယခုဖြစ်ပါတယ်
ဆီမွန်မစ်စစ်ခ်ျသည် Luke Cage ရာသီ ၂ တွင်ခိုင်မာသောအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် Iron Fist နှင့်သူမ၏တကယ့်ဘဝသူရဲကောင်းများကစားခြင်း၏အရေးပါပုံကိုအကြိုပြသသည်။
နောက်ဆုံးတွင်ဗန်ဟယ်လ်စင်ရာသီ ၃ ကို Netflix ၌ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်
Empire Season 1 သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း
အဆိုပါကလေးထိန်း: Killer ဘုရင်မသည်ကောင်းသနည်း
အိမ်မှာနှင့်သွားလာရင်းထိပ်တန်းအဆင့်အသံဖိုင် ၁၀ ခု
Best Show အပါအ ၀ င် MTV Awards4ရရှိသော Stranger Things
အချစ်နှင့်မင်းမဲ့စရိုက်ရာသီ (၂) ရက်၊
Ranch ကြယ်ပွင့် Danny Masterson သည်အမျိုးသမီးသုံး ဦး အားမုဒိမ်းပြုကျင့်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်
When Call ခေါ်ဆိုသည့်ရာသီသည် ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလတွင် Netflix မှထွက်ခွာသွားသည်
တ ဦး တည်းလာကြတယ်လူကိုရာသီ2ep 14
ရာသီ၏ရာသီ 12 စတင်ပါဘူး
တစ်ဦး wallflower ဖြစ်ခြင်း၏ Netflix အခွင့်အရေး
Marvel ရဲ့ Daredevil သွန်း: Elektra ကားအဘယ်သူနည်း
ယခုအပတ်တွင်ကြည့်ရှုရန် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးပွဲ ၅ ခု - Narcos, Pretty Little Liars နှင့်အခြားအရာများ
ဒါဟာ Philadelphia တွင်ရာသီ 12 အတွက်အမြဲတမ်းနေသာရဲ့ Netflix ကအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ?
Netflix စီးရီးအတွက်ဖြေရန်လိုအပ်သည့်မေးခွန်းများအတွက်စာရိုက်သည့်အချိန် ၂း၅ တွင်မေးခွန်းများ
War Dogs သည်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပါသလား။